I-Semalt Expert ichaza indlela yokususa i-Ilovevitality kunye no-Darodar kwi-Google Analytics
Ukuba usandulungele i-website entsha ye-brand kwaye ujonge into engaqhelekanga kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kukho amathuba okufumana i-fake traffic. U-Julia Vashneva, uSemalt uMphathi oyiNtloko uMpumelelo weMathengi, uthi i-spambots izakukhukula amanani akho kunye nokutshisa kwinqanaba lokuhamba kwimizuzu embalwa. Uza kubona ukuba izithuthi ezininzi ziza kuveliswa ngu-darodar.com, ilovevitality - oculos de sol artesanal.com, kunye nezinye iindawo zokudlulisa. Umbuzo kuphela oza kubangela ingqondo yakho yintoni eyenzekayo kunye nendlela yokulahla iinkqubo zokudlulisa umoya?
Ingqungquthela eDarodar naseIlovevitality.com
IDarodar kunye nelovevitality.com zibhekiswa njengabantu abafakiweyo. Zombini ezi nkonzo zikhusele i-intanethi ngemiboniso yamangqina, ngelixa zibiza ukuba zithumela ukutyelela kwangempela ngokuthengisa kunye nee-campaigns ze-SEO. Ilovevitality.com kunye neDarodar ziiirobhothi eziza kutshitshisa iwebhu ukuba iguqe idatha yakho ye-Google Analytics. Ngelishwa, banikezela ngeempembelelo zobuxoki, kwaye izinga lokuhlawula lihlala liphezulu kunalindelekile. Baye bahlasele amanamethi ewebhusayithi yakho kwaye bayichaze ngokungekho idatha yeGoogle Analytics. Ilovevitality.com kunye neDarodar zizenzekelayo kwaye ziphazamisekile, ezibangela iingxaki ezininzi kuwe. Ngaphandle kokuba ungabhalanga ngeenkonzo kunye nokunikezelwa kwazo, ngokuqinisekileyo ziya kungena kwiwebhusayithi yakho.
Isingeniso kwi-Spam Referral
Kuphosakele ukuba nayiphi na intengiso isilungileyo kuba i-traffic quality ixabiseke ngakumbi kunezobhengezo ezingabalulekanga. Enyanisweni, abaninzi be-webmasters bachitha iziza zabo ngenxa yeendlela ezibi..Iimpawu ze-Spambots ziyizona zinto eziphambili, kwaye akulula ukuzikhusela. Ngenhlanhla, kukho iingcebiso, amacebiso, kunye neendlela zokukhusela iwebhusayithi yakho kwi-traffic spam kunye ne-bots. I-bots zihlala zithumela iindawo ezinobungozi kunye nedatha kwiziko lakho kunye ne-Google Analytics ngokubanzi.
Susa iDarodar ngeendlela .htaccess
Ukuba awukwazi nto malunga nefayile ye -htaccess okanye i-FTP, makhe ndikuxelele ukuba yindlela enye engcono yokususa iDarodar. Unokukrazula ukuthunyelwa kwezinto eziphathekayo ngale ndlela, kwaye kuya kuthatha imizuzu embalwa nje. Udinga ukufikelela kwi-FTP iseva kunye nefayile .htaccess. Xa kunjalo, awukwazi nantoni na ngalezi zimbini iinkonzo, siyakunciphisa kule ndlela kwaye ufuna ukuba uqhube phambili njengoko singafuni ukuba ubhekane nayo nayiphi na ingxaki kwixesha elizayo. Kufuneka ulandele le nyathelo elula ukumisa iDarodar, ilovevitality.com, kunye nezinye izilwanyana ezibangelwa ukutshabalalisa indawo yakho. Vula ifayile .htaccess kwaye ufake ikhowudi ethile kuyo. Le khowudi iya kukunceda ukuvimba iibhotile zeDarodar ngexesha elifutshane.
Susa iDarodar kwi-Google Analytics
Ukuba ungaziva ukhululekile usebenzisa iindlela ezingentla, sincoma ukuba ususe iDarodar kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics. Le akhawunti iye yakhela kwiinkqubo zoLawulo lweFayile, eziza kukunceda uzifihle izinto ezingabonakaliyo kwi-ID yakho. Kufuneka ukhumbule ukuba izifayile azikwazi ukususa i-traffic engaziwayo yonke. Kunoko, banokuzifihla kumbono. Yiya kwicandelo lolawulo lwe-akhawunti yakho kwaye wenze i-Filter entsha. Akufanele ulibale ukususa iDarodar kwaye ulondoloze izicwangciso.
Isexwayiso: Sinincoma ukuba ungasebenzisi nayiphi na le ndlela ngaphandle kokuqinisekisa ngokufanelekileyo. Ithuluzi lokususa i-Darodar lingenza iingxaki kuwe, ngoko kufuneka ukhethe indlela efanelekileyo emva kokubonisana nengcali yecomputer.